Qurbo Joog Dollar Laggaga Qaatay Togwajaale – Rasaasa News
May 9, 2014 ah, Dollar, Joog, Laggaga, Qaatay, Qurbo, Togwajaale
Jijiga, May 9, 2014 – Xarunta ganacsiga ee Xadka Atoobiya iyo Somaliya ee magaalada Togwajaale, ayey ciidanka federaalka Atoobiya ee ilalinta canshuururuhu lacag badan oo Dollar kaga qaateen dad Qurbo joog ah.
Magaalada Togwajaale oo ah xarunta ganacasi ee ugu wayn kuna xidhan yahay Degaanka Somalidu, ayaa maalin walba waxaa taga ama ka yimaada kumanaan ruux oo ku jira hawlo ganacsi. Magaalda Toga badha waxaa dhextaal bar kontarool oo ay dhigteen ciidanka federalka Atoobiya, halkaas oo ay qabtaan hawlo ka baxsan hawlaha ay u joogaan.
Dadkan lacagta laga qaatay oo ka yimid dhinaca degaanka Somalida, ayaa dhawaan yimid degaanka, iyaga oo ka yimid Yurub. Waxay sheegeen in ayna ganacsi u tagin Togwajaale balse ay u tageen in ay soo arkaan ganacsiga u dhaxeeya magaalada Jijiga iyo Togwajaale.
Ciidanka federalka ee jooga saldhiga canshuuraha [customs], ayaa xidhan dhar caadi ah, waxayna wada shaqayn basaasnimo leeyihiin qaar ka mida dadka Somalida ee magaalada Togwajaale. Waxayna dhac sharci daro ah ku hayaan dadka Somalida ah, oo cabsi badan ka qaba ciidanka Atoobiya.
Dadka lacagta laga qaatay oo jooga Jijiga diidayna in magacooda la sheego, ayaa sheegay in laga qabtay iyaga oo Magaalada dhex socda dhinaca Degaanka Somalida, baadhitaan khalada oo lagu sameeyey ka dibna waxaa laga helay lacag Dollar ah, taas oo laga qaatay.
Dollarka iyo lacagaha adag ayaa koontarabaan ka ah Atoobiya, hadii laggugu qabtana waxaa sharciyeysan in aan lagu xidhin laakiin lacagta lagaa qaato, arintaas oo muujinaysa budhcadnimo.
Waxay sheegeen dadka lacagta laga qaatay in ay ciidanka canshuuraha waydiisteen in ay siiyaan warqad cadayna in lacagta laga qaaday, waana loo diiday. Mid ka mida dadka lacagta laga qaatay ayaa yidhi, safar baan ahaa lacagtaydana jeebka ayaan ku watay, mana moodayn in baadhid la igu smaynayo magaalada dhaxdeeda. Waxaan arkay buu yidhi budhcad Somalida fiirsanaysa, oo meel kasta ku baadhanaysa.
Lix ka Mida Mareeglayaashii iyo Wariyeyyaashii Zone 9 oo Maxkamad la Soo Taagay